- | उपाध्यक्ष, नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादी सिपी गजुरेल तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा प्रत्यक्ष रुपमा होमिए, जेलनेल पनि भोगे । माओवादी पहिलो संविधानसभाबाट ठूलो दल बन्दै सत्ता र सरकारमा गए पनि त्याग र बलिदान गरेका उनले लाभको पद लिएनन् । बरु, पार्टी नेतृत्वको गलत कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने हार्डलाइनर नेताका रुपमा चिनिने गजुरेलले निरन्तर औंला ठड्याइरहे । शान्ति शान्ति प्रक्रियामा आएपछि एमाओवादीले दोस्रोपटक भोगेको विभाजनमा सिपी गजुरेल पार्टी विभाजन गरेर नयाँ बनाउनु पर्छ भन्ने लाइनको निर्णायक बनेर खडा भए । अहिले एमाओवादी र उनको पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीबीच एकताको कुरा चलिरहँदा पनि उनी एकताको विपक्षमा देखिएका छन् । भन्छन् – ‘अहिलेकै अवस्थामा एमाओवादीसँग समूहगत एकता असम्भव छ ।’ गजुरेलसँग दुई माओवादी एकता, कम्युनिष्ट आन्दोलन र राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
दुई माओवादीबीच एकताको सम्भावना टरेकै हो त ? हामीहरुको पार्टीमा एकीकृत माओवादीसँग वार्ता कुन आधारमा गर्ने र एकताका आधारहरु के–के हुन्छन् भन्ने विषयमा छलफल चलिनै रहेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि छलफलको मुख्य विषय यही नै बनेको थियो । त्यहाँ थोरै मतभिन्नता देखिएकाले ४ जना पूर्व पदाधिकारी बसेर सहमति निकाल्न भनिएको थियो । सहमतिमा पुग्न छलफल पनि भयो । तर,सहमति हुन सकेन । गृहकार्य नपुगेको ठानेर हामीले केन्द्रीय समिति बैठक केही पर सारेर छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छौं । अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं, के गर्ने कसो गर्ने भन्नेकुराको निक्र्योल गर्न गृहकार्यमा छौं । एकता गर्ने वा नगर्ने भन्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन ।
बाहिर देखिँदा सिद्धान्त र लाइनमा कुरा नमिलेको जस्तो देखिए पनि भित्री कारण अरु नै भएको र एकता प्रक्रियामा तपाईंलगायतले नकारात्मक भूमिका खेलेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ? यस्तो कुरा मैले पनि सुनेको छु । यो गलत कुरा हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । एकातिर एमाओवादीलाई नवसंशोधनवादी भयो, नयाँजनवादी कार्यदिशा छाड्यो भन्ने आरोप लगाउने, प्रतिक्रियावादी संविधान बोकेर हिँड्यो पनि भन्ने ? अनि पार्टी एकता गर्ने पनि भन्ने ? यो दोहोरो चाल हुन सक्दैन । यदि कसैले एकता गर्न चाहन्छ भने विश्लेषण सच्याउँदै भन्न सक्नुपर्यो – एमाओवादी खाटी क्रान्तिकारी रहेछ, बिग्रिएका त हामी पो रहेछौं । पुनर्गठन गर्न पनि गलत रहेछ । यदि होइन भने यही अवस्थामा एकता हुन सक्दैन । विश्लेषण सच्याएर पार्टी एकता गर्ने कुरा मिल्न सक्ने विषय भयो । तर, एकातिर नवसंशोधनवादी भन्ने, त्यो महाधिवेशनको लाइन ठीक थियो भन्ने, संविधान प्रतिगामी भयो पनि भन्ने र एमाओवादीसँग पार्टी एकता गर्नुपर्यो अब भन्ने कुरा पूरै विसंगतिपूर्ण कुरा हो । विसंगतिपूर्ण निर्णय हामीले कदापि गर्नुहुन्न, इतिहासले यस्तो निर्णयलाई क्षमा दिँदैन । हामीले निर्णय गर्दा संगतिपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ, जे सही हो त्यही निर्णय गर्नुपर्छ । हो, पहिले ठूलो पार्टी थियौं, अहिले कमजोर भइयो । तर, कमजोर भइयो, पहिलेको ठूलो पार्टी सानो भयो, कसैले गनेनन् भन्दैमा व्यवहारिक कुराहरुलाई देखाएर कुनै पार्टीसँग एकता गर्ने भने कुरा मान्य हुँदैन । यो गलत हुन्छ ।